Ideas de paleta de colores Okwu Mmalite nke Palette Agba
Okwu Mmalite nke Palette Agba
Palette Na-enweghị Egwuregwu nke Na-enweghị Efu
N’izugbe, odo na-ejikọta ya na amamihe, okike, nnwere onwe, anwansi na ihe omimi. Inwe odo odo n’okpuru ikike ayi (nka) dika ihe siri ike. Ndụmọdụ Green banyere ahụike na ego, odo na-egosi amamihe, ugwu na nsọpụrụ. Uwe ọma m abụghị odo odo gị. N’ihi na etinyere odo odo site na ijikọta agba na-ekpo ọkụ na agba oyi, ọ na-ejigide ma ihe abụọ ahụ. Uwe a na-acha odo odo na-adịkarịghị na ọdịdị na, n’ihi ya, a na-ewerekarị ya dị ka ihe dị nsọ. Uhie na-acha odo odo na agba (a hụrụ n’etiti uhie na acha anụnụ anụnụ na agba agba) na ndo nke agba ntụ na-agbazekwa ma isi na-acha anụnụ anụnụ na ọkụ na-acha ọbara ọbara bụ isi.
Nhọrọ palette dị elu
Ozugbo ị setịpụrụ agba ndị ahụ, ndị mmadụ makwaara banyere ika gị, ị na-echeta nke ahụ maka agba ahụ. Ọtụtụ ndị ga-asị na acha anụnụ anụnụ bụ ụcha ha kacha hụ n’anya. Ebe ọ bụ agba kachasị amasị ọtụtụ ndị, ị nwere ike ịrịọ ndị na-ege ntị ka ama. Colorscha agba dị mma maka nzụlite nwere ezigbo ọchịchịrị maka ederede ahụ n’onwe ya. O zuru oke maka agba agba, oku maka ime ihe, ma ọ bụ ebe ọ bụla ha chọrọ ịdọrọ uche ndị mmadụ. Na njedebe, ha na-edepụta ụda olu dị iche iche yiri ihe na-enweghị obere ihe masịrị ha.
Palette ụcha – akụkọ ahụ
Etu ị ga-esi họrọ ụcha dị mma maka ngwa gị Otu esi ahọrọ ụcha ziri ezi maka ngwa gị Gosipụta nghọta ndị na-ege ntị Ọ bụ ezie na agba ụfọdụ nwere ihe zuru ụwa ọnụ, ọtụtụ agba nwere nghọta mpaghara. Agba nke ngwa a ga-adaborịrị na ọdịnaya nke ngwa ahụ na ebumnuche ya. Agba mara mma nke pụtara na ngwa gị nwere ike ibute nsonazụ.
Etu esi amalite na Palette Agba?
Ndị mmadụ na-ahụ agba na mbụ, yabụ na ihe ọ bụla bụ nke abụọ. N’ezie, ịchọrọ ịhọrọ agba ndị masịrị gị n’ezie. Agba ahụ nwere ọdịdị akwara dị omimi nke na-eme ka ihe zutere ya na okike pụta ụwa. Colorsfọdụ agba nwere ike ịgbanwe ọnọdụ anyị, ma ọ bụdị emetụta ọnọdụ anụ ahụ anyị. Colorcha na teknụzụ zuru oke zuru oke ga-aghọ ngwa ahịa nkeonwe maka ngwa gị.
Akụkọ ihe mere eme nke Palette Agba Na-acha odo odo
Mgbe ndị ọbịa ọhụrụ batara na blọọgụ gị, ihe mbụ ha na-akọwa bụ agba. Iji agba mee ihe iji mee ka ime ụlọ sie ike, ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọfịs bụ ụzọ dị mfe iji meziwanye ike na gburugburu gị na karịsịa n’ime gị. A na-eji nlezianya na-eme ka ụwa maa jijiji. Agba akara ngosi ngwa ahụ kwesịrị igosipụta oke ngwa ọfụma ọfụma.
Otu esi ahọpụta ụcha nke palette
Imelite palette ụcha kichin gị ekwesịghị ịdị oke ọnụ. Mpempe akwụkwọ na-acha odo odo bụ isi nhọrọ nke agba 2 ma ọ bụ atọ enwere ike iji mee ihe maka ika gị ọ bụla. Mpempe akwụkwọ ụcha anyị na-egosi ihu dị n’otu na mgbasa ozi niile, gụnyere ihe ndị e biri ebi, ihe nkwado na oghere ịntanetị. Kwesiri ịkọwapụta palette ụcha gị ma gbochie agba atọ. Peeji nke agba paịl PALETTESA na-akwado ụcha agba na-eji ya emechaghị ya.
Na-esote, m ga-akọwa ụzọ ị ga – esi jiri ihe na – ahọrọ ụcha ihe oyiyi dị ka ndị a:
1. Pịa Họrọ “Họrọ ihe onyonyo gị”, wee họrọ onyonyo ịchọrọ ịmata koodu ụcha na ibu.
2. Dee aha ihe oyiyi ahụ na kọlụm ide, mgbe ‘Tinye aha oyiyi’
3. Wee pịa “Ziga”
Mgbe nke ahụ mechara, usoro agba agba kachasị, ihe atụ ụcha, agba hexadecimal, agba RGB na aha agba agba zuru oke na tebụl.
Kedu?? Ọ dị mfe, nri?
Gbalịa bulite ọtụtụ foto ị nwere. Ma lelee nsonaazụ nke agwakọta ụcha na tebụl. Onyinyo ị buliri ga-egosi agba niile na agba, ụcha hexadecimal, agba RGB yana aha agba.
Esta "Okwu Mmalite nke Palette Agba" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.